Thwebula BS.Player 2.70 – Windows – Vessoft
BS.Player – umdlali ukudlala alalelwayo video amafayela ngetakhiwo letehlukene. Isofthiwe uyakwazi ukudlala HD video, ukusebenza ne uhlu lwadlalwayo, ulungise ijubane video wokubuka, enze ukuthunjwa esibukweni, njll BSPlayer ikuvumela ukuba ukucabanga futhi ukulanda amavidiyo kusukela service YouTube. Isofthiwe isekela takhiwo isihlokwana ethandwa kakhulu futhi uyakwazi ukuthola ngokuzenzakalelayo futhi thwebula engezansi ulahlekile. BSPlayer iqukethe iqoqo olukhulu izikhumba ezahlukene ukushintsha isixhumanisi esibonakalayo sesidlali izidingo yomsebenzisi.
Ukudlala HD video
Usekela iningi alalelwayo ifomethi
Ukudlala kwe-video usakaza kusukela le-YouTube
ukweseka kwamakhono engezansi
Isethi enkulu izikhumba
Amazwana on BS.Player:
BS.Player Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... VLC 2.2.4
GOM Media Player 2.2.77.5240, 2.2.69.5228 futhi 2.2.73.5235
Abadlali Media The odumile media Umdlali izici eziphambili setting. Isofthiwe isekela takhiwo isihlokwana multiple futhi uthola amakhodekhi anembako internet.
English, Español, 中文, 日本語... MKV Player 2.1.23
English, Українська, Français, Español... Facebook Video Downloader 3.17.19